Ukucwangcisa ifanitshala yakho yokulala
Ngu-Katharine Kaye McMillan, Patricia Hart McMillan
Umbhede yinto ephambili yefanitshala nakweyiphi na igumbi lokulala, kwaye ngokwendalo iba yindawo ekugxilwe kuyo. Ifanitshala yokulala ngokwesiqhelo icwangciswe ngokwemigaqo embalwa ngokubanzi. Okona kuninzi kusekwe kwingqondo eqhelekileyo, nazi izikhokelo ngokubanzi ekufuneka uzilandele:
Ityala: © iStockphoto.com / hikesterson
Ngokwesiko, abantu bathambekele ekubekeni ibhedi ephindwe kabini, enobukhulu obukumkanikazi, okanye yokumkani ngokuchasene nombindi wodonga oluphambi komnyango ophambili wegumbi. Ngolu lungiselelo, ibhodi yebhodi ephambili yindawo ekujongwa kuyo xa ungena kwigumbi.
Ukuba ubukhulu begumbi lakho bukuthintela ekubekeni ibhedi yakho eludongeni ngaphesheya komnyango, ezinye izinto ezinokukhethwa zixhomekeke ekubeni loluphi udonga olude ngokwaneleyo ukulungiselela ibhedi. Ukubekwa kwidayalonal kusebenza kakuhle xa unendawo.
Musa ukubeka ibhedi phantsi kwefestile, ukuba ifestile iya kuhlala ivuliwe. Iifestile ezivulekileyo zingenza uyilo olungathandekiyo. Ukubeka ibhedi phakathi kweefestile ezimbini, nangona kunjalo, kusebenza kakuhle.
Ukuba ikhaya lakho linomoya-moya okanye lifudunyezwa unyaka wonke kwaye iifestile kunqabile ukuba zivulwe, unokukwazi ukuwutyeshela lo mthetho.
Musa ukubeka ibhedi apho kuthintela umnyango kwigumbi okanye kwindlela yokuhamba egumbini.
kutheni iingono zam zibuhlungu kangaka
Cinga ngamalungiselelo empahla yendabuko ukuba ukwenza njalo kuya kukhulula indawo okanye usebenzise indawo ngendlela enomdla ngakumbi.
Umzekelo, ibhedi inokubonakala ibekwe ngokumangalisayo ibekwe phambi kwefestile ekhuselekileyo; kwidayagonal, ethatha indawo eyongezelelweyo; ecaleni kodonga, ukwandisa umgangatho womgangatho; okanye kwi-alcove (indlela ebizwa ngokuba yi ibhedi evaliweyo ).
Ukuba ikhabethe lakho likhulu ngokwaneleyo kwaye ungathanda ukukhulula isithuba somgangatho, beka isifuba sakho seedrowa ngaphakathi kwigunjana lakho lokuhamba. Ukwenza oku kuyakukuvumela ukongeza ezinye zefanitshala, ezinje ngedesika yokubhala, iqela lokuhlala, okanye umabonakude omkhulu wesikrini, ukuguqula naliphi na igumbi lokulala libe yindawo efanelekileyo.
Amagumbi okulala asetyenziswa liqela elithile labantu aneemfuno ezizodwa. Nokuba uhombisa igumbi lokulala eliyintloko, igumbi leendwendwe, okanye igumbi labantwana, la macandelo alandelayo akunika iingcebiso ozifunayo.
Amagumbi okulala aphezulu
Igumbi lokulala eliyintloko akufuneki libe likhulu, kodwa kufuneka linikezele ngezixhobo ozifunayo. Ukuba indawo yakho ayinabuchule kangako kunokuba ungathanda, jonga ezinye zeengcebiso zokuhombisa igumbi lakho lokulala:
Yenza igumbi lokulala libukeke likhulu ngokususa ukungqubana.
Sebenzisa ifanitshala eyimfuneko kuphela. Ukuba unako, tyhala isifuba seedrawer kwindawo yokuhamba ukuze ungene kwindawo yomgangatho.
Gcina ibhedi ibonakale iphantsi. Sebenzisa ibhodi yentloko, kodwa ungayisebenzisi i-footboard, kwaye ukhethe enye into ngaphandle kwebhedi eneeposta ezine, zonke ezo zithatha indawo yokubonakala, zisenza igumbi libonakale lincinci.
Gcina yonke ifanitshala yakho-njengayo yonke imibala yakho-ukukhanya. Ifenitshala ekhanyayo, udonga, imigangatho, unyango ngefestile, kunye nezinto zokulala zenza igumbi libonakale likhulu.
Nokuba ubungakanani kwigumbi lakho lokulala, ezi ngcebiso zilandelayo zinokukunceda ukuba uzenze zikhululeke kangangoko:
Yongeza iitafile ezisecaleni kwebhedi ezinkulu njengendawo eziza kuvumela indawo. Ukuba ufunda okanye ubukele iTV ebhedini, uya kuzifumana ezi tafile ziluncedo.
Ungathenga iitafile zekhefi yokutyela ngemali encinci kwaye uzifake ngeequilts.
Zama ukwenza indawo kwisitulo esinye esitofotofo. Izitulo zilungile kwinkampani ngemini yokugula, yokuphumla emini, okanye yokufunda.
Cinga ukugcwala yonke imigangatho yokulala ukunciphisa ingxolo kwigumbi.
Yongeza idesika yenenekazi-elincinci, elilinganiselweyo elinikezela ngokubhala iileta njalo njalo-ukuba unegumbi.
Amagumbi okulala abantwana
Abaselula bahlala beyazi into abayifunayo kwigumbi lokulala kwaye abayikucotha ukukuxelela ukuba bafuna ukugcinwa kweencwadi kunye nomculo kunye nendawo yokuqokelela kwabo nantoni na ongayibiza ngegama. Banemibono eqinileyo malunga nesitayile kunye nemibala, ke cela! Kwaye xa unyana okanye intombi yakho icela umbala wasendle, yenza konke okusemandleni akho ukumcenga ukuba ayisebenzise njengesithethi.
Imisebenzi engakumbi nangaphezulu ukusuka kwi-Intanethi ukuya kulonwabo yenzeka kwigumbi labakwishumi elivisayo. Iindawo zokuhlala ezongezelelweyo kunye neetafile ezincinci zibonelela ngendawo yeendwendwe. Gcina ifanitshala iyasebenza kwaye kulula ukuyinyamekela.
Iindawo zokugcina abantwana kufuneka zicwangciswe kucingwa ngeminyaka ezayo yomntwana. Kodwa kwasekuqaleni, yenza indawo yetafile eguqukayo kufutshane nebhedi. Njengamaxesha onke, gcina ukhuseleko engqondweni. Ezi ngcebiso zilandelayo ziya kukunceda wenze zonke ezi zinto:
Gcina iibhedi kude neefestile kunye neentambo zemfama ezingaboniyo.
Qinisekisa ukuba iibhedi kunye neebhedi zebhedi zihlangabezana nemigangatho yokhuseleko. Jonga ukubona ukuba oomatrasi balingana ngokufanelekileyo emacaleni ebhedi. I-Slats, i-spindles, i-rods kunye neeposti zekona akufuneki zibe ngaphezulu kwe-intshi ye-2-3 / 8 ngaphandle komnye. Qinisekisa ukuba umntwana akakwazi ukukhulula icala lokwehla kwebhedi.
Khetha izifuba kunye neekhabhathi ezingenakunqunyulwa (kwanaxa iidrowa zivulwa kwaye umntwana erhubuluza angene kuzo). Oku kunokubiza ukuba ubakhusele eludongeni ukuze ukhuseleke.
Fumana izixhobo zekhompyutha ezirhangqiweyo, ezinesanti, kwaye azinamiphetho ibukhali.
Xhobisa zonke iindawo zombane ngeeplagi zokhuselo zeplastiki.
Ukuphelisa nayiphi na imitha emincinci yokuphosa kumgangatho omtyibilizi.
Qinisekisa ukuba yonke i-flooring ayinakunqanda.
Ukuphelisa iintambo ezijingayo kwiimfama zefestile.
Khetha iibhedi zebhedi ezinamanqwanqwa aqinileyo, iinyanda zokubambelela, kunye neentsimbi zokhuseleko.
Qiniseka ukuba unebhedi yeendwendwe zokulala ngamanye amaxesha. Indawo yokulala, egcina kakuhle ibhedi yesibini phantsi kwesiqhelo, sisisombululo esifanelekileyo kumagumbi abantwana.
Amagumbi okulala eendwendwe
Ukubekela bucala igumbi leendwendwe kwenza ukuba zihlale zikhululeke ngakumbi kungekuphela kubo, kodwa nawe. Unakho ukufaka igumbi leendwendwe ngebhedi emangalisayo kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko kwaye ulibale ngayo. Jonga ezi ngcebiso zilandelayo zendlela yokwenza igumbi lakho leendwendwe lihlale kamnandi:
Thenga indawo ebhedini yosuku egcina indawo entle okanye isofa efanelekileyo ngokufanelekileyo eludongeni nasendleleni.
Ukuguquguquka kwezi bhedi kubenza ukuba babe lukhetho olumnandi kwiofisi yasekhaya okanye kwelinye igumbi elinemisebenzi emibini. Usenokucinga ngokufaka ibhedi yaseMurphy efihla kwigunjana.
Qinisekisa ukuba undwendwe lwakho lunendawo eninzi yekhabhathi.
Nikezela iiseti ezimbini zamashiti, umthuthuzeli, imithwalo ekhethekileyo, isiciko seduvet, kunye neham yomqamelo kwigumbi lakho leendwendwe.
Kuthatha ixesha elingakanani ukusebenza kakubi?
cd audio track kwi mp3
Ukutya kweekhalori ezili-1800 kubantu abaneswekile
advecta 3 izinja
Ukubhalela abantwana iincwadi zeedummies
yi-macrobid iyeza lokubulala iintsholongwane